अमेरिकामा Working Visaमा को जान पाउने ? कसरी जाने ? / Visa Guide Nepal
अमेरिकामा Working Visaमा को जान पाउने ? कसरी जाने ?
March 03, 2020 767
अमेरिकाको कामदार भिसा एचवान बी कामदार आफैले फाइल गर्न मिल्दैन । यसका लागि अमेरिकामा रहेको रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकामा कामदार भिसामा आउन चाहने व्यक्तिलाई जागिरको अफर गरेको हुनुपर्ने अमेरिकाका चर्चित कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईले khasokhas.com लाई जानकारी दिनुभएको छ । अमेरिकामा रहेको कम्पनीले जागिरको अफर दिइसकेपछि कम्पनीका तर्फबाटमात्र यो भिसाका लागि अनलाइनमार्फत प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन गराउन सकिन्छ ।
यो भिसाका लागि नेपाल वा अमेरिकाबाहिरको अन्य मुलुकबाट अमेरिका आउन चाहने व्यक्ति आफैले आवेदन दिन मिल्दैन । अमेरिकन कम्पनीले जागिरको अफर गरिसकेपछि उक्त व्यक्तिलाई अमेरिकामा ल्याउनका लागि कामदार भिसा एचवान बीका लागि आवेदन दिनसक्छ । जसका लागि मार्च १ बाट अनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलेको छ भने मार्च २० सम्म अनलाइनबाट आवेदन दिनसकिन्छ ।
अमेरिकन कम्पनीले अनलाइनमार्फत प्रारम्भिक दर्ता गरिसकेपछि त्यसमा छनौट भएमा विदेशमा रहेको कामदार अमेरिका आउनका लागि प्रकृया सुरु हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि कुनै व्यक्ति नेपालमा छ र उसलाई अमेरिकन कम्पनीले रोजगारको अफर गरेको छ भने सुरुमा अमेरिकन रोजगारदाता कम्पनीले नै मार्च २० भित्र उसका लागि आवेदन अनलाइनमार्फत दर्ता गराउनुपर्छ । त्यसमा छनौट भएमा अमेरिकामा रहेको रोजगारदाता कम्पनीले नै प्रकृया अगाडि बढाउँछ । र, युएससीआईएसबाट आवेदन स्वीकृत भएमा नेपालमा रहेको व्यक्ति कामदार भिसा लिएर अमेरिका आउनसक्छ ।
गतबर्षदेखि लागु नयाँ नियमले अमेरिकन डिग्री नलिएकाहरुको एचवानबी कोटामा पनि अमेरिकन डिग्री होल्डरको अतिक्रमण बढाएको छ । अमेरिकाबाहिर पढ्नेहरुलाई भन्दा अमेरिकन डिग्री लिएकाहरुलाई मौका दिनका लागि नयाँ नियम ल्याइएको हो । अमेरिकामा डिग्री लिएर स्वेदश फर्किसकेको विद्यार्थीले पनि यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्छन् । उदाहरणका लागि कुनै नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा डिग्री लिएर नेपाल फर्किसकेको छ भने उसलाई नयाँ नियमले प्राथमिकतामा राख्छ ।
April 11, 2021 461
February 14, 2021 375
December 27, 2020 5078
म्याग्दीका वीरबहादुर पुनले आमासँग सँगै बेलायतमा बस्न...
© 2021. Visa Guide Nepal.